The Land Before Time XI: Invasion of the Tinysauruses (2005) | MM Movie Store
ပရိတျသတျတှအေတှကျ ဒီတဈခါ တငျဆကျပေးခငျြတာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှဈက စတငျထှကျရှိလာခဲ့တဲ့ The LandBefore Time ဆိုတဲ့ ကာတှနျးဇာတျလမျးလေးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးလေးအကွောငျးမပွောခငျ သိစခေငျြတာလေးတဈခုရှိပါတယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတျလမျးကို ဖနျတီးသူတှအေကွောငျးပါ ….
Producer တှကေတော့ ဂြေျာ့ဂျြလူးကပျဈ နဲ့ စတီဗငျစပီးဘာ့ဂျ တို့ဖွဈကွပွီး ဒါရိုကျတာကတော့ ဒှနျဘလုသျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့လို ရုပျရှငျအကြျောအမျောကွီး ၃ ယောကျဆုံထားတဲ့ဒီလိုစီးရီးမြိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတဈခုတညျးသာ ရှိတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ပွီးတော့ ဒီကာတှနျးကားလေးမှာ သတိထားမိတာက ကလေးလေးတှရေဲ့ တကယျ့ အပွုအမူနဲ့ စိတျနစေိတျထားလေးတှကေို ထညျ့ရိုကျထားတာပါ။
စိတျတိုလှယျတဲ့ကလေး တဈခုခုဆို ကွောကျတတျတဲ့ ကလေး သူမြားကို သနားတတျတဲ့ကလေး ဘာမဆို စပျစပျစုစု လုပျတတျတဲ့ကလေးတှေ ပွီးတော့ သူတို့ရဲ့ အပွုအမူလေးတှကွေောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ အကြိုးဆကျလေးတှကေို ပွပေးထားတာကentertainment တငျမက ကလေးလေးတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထားလေးတှကေိုပွုပွငျဆုံးမရာမှာ တဈနညျးနညျးနဲ့ အထောကျအကူပေးပါလိမျ့မယျ။
ဒီတော့ အမြားကွီးတော့ မညှနျးတော့ပါဘူး ကမ်ဘာဦးတုနျးက ဒိုငျနိုဆောကွီးတှကေ ဘယျလိုနကွေလဲလို့ ကလေးလေးတဈယောကျယောကျကမြား မေးလာခဲ့ရငျ ကြှနျမ ဒီဇာတျကားလေးကိုပဲ ပွဖွဈမယျထငျပါတယျ။
အိမျမှာ ကလေးရှိတဲ့သူတှရေောကာတှနျးကားနှဈသကျတဲ့သူတှရေော ဒီကာတှနျးကားလေးတှကေို မွညျးစမျးကွညျ့ပါ နောငျတမရစရေဘူးလို့ အာမခံပါတယျနျော။
ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ The LandBefore Time ဆိုတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးအကြောင်းမပြောခင် သိစေချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးသူတွေအကြောင်းပါ ….
Producer တွေကတော့ ဂျော့်ဂ်ျလူးကပ်စ် နဲ့ စတီဗင်စပီးဘာ့ဂ် တို့ဖြစ်ကြပြီး ဒါရိုက်တာကတော့ ဒွန်ဘလုသ် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လို ရုပ်ရှင်အကျော်အမော်ကြီး ၃ ယောက်ဆုံထားတဲ့ဒီလိုစီးရီးမျိုးဟာ Movie Industry မှာ ဒီတစ်ခုတည်းသာ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီကာတွန်းကားလေးမှာ သတိထားမိတာက ကလေးလေးတွေရဲ့ တကယ့် အပြုအမူနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို ထည့်ရိုက်ထားတာပါ။
စိတ်တိုလွယ်တဲ့ကလေး တစ်ခုခုဆို ကြောက်တတ်တဲ့ ကလေး သူများကို သနားတတ်တဲ့ကလေး ဘာမဆို စပ်စပ်စုစု လုပ်တတ်တဲ့ကလေးတွေ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်လေးတွေကို ပြပေးထားတာကentertainment တင်မက ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ဆုံးမရာမှာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ အထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အများကြီးတော့ မညွှန်းတော့ပါဘူး ကမ္ဘာဦးတုန်းက ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေက ဘယ်လိုနေကြလဲလို့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ယောက်ကများ မေးလာခဲ့ရင် ကျွန်မ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ပြဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အိမ်မှာ ကလေးရှိတဲ့သူတွေရောကာတွန်းကားနှစ်သက်တဲ့သူတွေရော ဒီကာတွန်းကားလေးတွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ နောင်တမရစေရဘူးလို့ အာမခံပါတယ်နော်။
Love Lesson – Link 1